🚜 Izitolo zasepulazini | Vakashela i-Hultsfred
Thenga endaweni yangakini endaweni yasemakhaya - eluhlaza, okusimeme futhi etshalwe endaweni.
Okukhethekile okutshalwe endaweni okufana noshizi, imifino, ojamu namasitrobheni kuthengiswa ezitolo zasemapulazini nasezitolo zegrosa kuwo wonke umasipala. Nali uhlu olukhethiwe lwezitolo zasemapulazini okungafanele uphuthelwe.
🍽️Yidla futhi uphuze
Izimpahla zekhwalithi ephezulu kuphela ezitholakala lapha. Inyama ikhiqizwa endaweni futhi inakekelwa kahle. Esitolo uzothola izinto eziningi ngenyama. Izimbambo nezibopho, inyama egayiwe kanye
Epulazini i-Räven & Osten, e-Lida ngaphandle kwase-Järnforsen, ushizi wenziwa ngendlela yobuciko nangendlela encane. Ubisi luvela kumlimi wendawo. Eduze nendawo yobisi iyatholakala
"Ukudla okuhle nonembeza ohlanzekile, usuka epulazini". Lapha ungakwazi uku-oda inyama ephilayo nekhiqizwa endaweni. Vakashela noma iholidi futhi uhlale epulazini eziphilayo, ukuhlangabezana nezilwane
Isitolo sepulazi siyindawo yokuvakasha ethokozisayo yalabo abafuna ukuthenga imikhiqizo yeqophelo eliphezulu. Phakathi nenkathi yama-strawberry, ungahamba uyozikhethela ama-strawberry akho. Esitolo